Moa Ve Tohanan’ny Al-Qaïda i Emmanuel Macron? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2017 13:51 GMT
Ity lahatsoratra ity dia niainga avy amin'ny asa fanamarinana nifarimbonan'ny ekipam-panoratana ao Frantsa sy ao amin'ny Fanjakana Britanika niarahana tamin'ny CrossCheck (Frantsay| Anglisy), fiaraha-miasa tsy mitady tombontsoa iadiana amin'ny fandisoam-baovao an-tserasera, ary navoaka indray noho ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Global Voices.
Tamin'ny 22 Martsa, nandefa pikantsarin'ny lahatsoratra iray nosoratana tamin'ny teny Arabo izay manasongadina ny sarin'i Emmanuel Macron tao amin'ny Twitter ny @AudreyPatriote. “Efa nisafidy ny kandidàny i Al-Quaïda dia i… # Macron. (Milaza ny fanambarany momba ny fanjanahantany izy ireo), “hoy izy nanoratra.
Avy amin'ny lahatsoratra navoakan'ny gazety Al-Masra tamin'ny 27 Febroary ny pikantsary . Miresaka momba ny firotsahan'ilay kandidà ho filoham-pirenena izany nandritra ny fitsidihany an'i Alzeria tamin'ny volana Febroary, izay nahitana azy nilaza ny fanjanahantany ho “heloka bevava atao amin'ny olombelona” nandritra izany fotoana izany.
Ny lahatsoratra dia mitondra ny lohateny hoe: «Nilaza ny fanjanahantany ho ‘heloka bevava atao amin'ny olombelona ny iray amin'ireo kandidà lehibe ho filoham-pirenena frantsay, tao Alzeria». Mikasika ireo « fanakianana» izay azon'i Macron avy amin'ny mpanao politika frantsay momba ny fanambarany ny lahatsoratra, araka ny hita eo ambony.
Gazety nomerika mifandray amin'ny sampana Islamikan'ny tambajotra Al-Qaida any amin'ny Saikinosy Arabia (AQAP) ny Al-Masra raha ny marina. Na izany aza, tsy mifandraika mihitsy amin'ny tian'ilay sioka hambara ny votoatin'ny lahatsoratra, izay tena nisy: tsy manohana an'i Macron ny Al-Quaïda.